Daawo boorsooyinkaaga: Tom Cruise oo ku waalan shandadaha la xaday
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Warshadaha Warshadaha » Daawo boorsooyinkaaga: Tom Cruise oo ku waalan shandadaha la xaday
Jebinta Wararka Caalamka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Wararka Raaxada • News • Dalxiiska • Wararka UK • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Tom Cruise oo waalan
Waxaad u malaynaysaa inaad tahay mid ka mid ah xiddigaha ugu caansan Hollywood -ka adduunka, waxaad ku jiri lahayd horyaal gaar ah, laakiin sida muuqata maya.
Xiddiga aflaanta Mareykanka Tom Cruise ayaa haatan ku duubaya filimkiisa Mission Impossible 7 oo ka socda Boqortooyada Ingiriiska. Ma u malaynaysaa in xiddig weyn oo isaga la mid ahi uusan ka welwelin doonin alaabta la xaday gaar ahaan ilaalada ilaaliya nolosha, xubnaha, iyo alaabta?
Mar labaad ka fikir, maxaa yeelay wiilka Tommy wuxuu helay dhammaan boorsooyinkiisii ​​oo ay ku jiraan alaab shaqsiyeed oo la xaday oo weli ku jiray gaariga kadib markii uu yimid UK.
Maya, maahan kaliya boorsooyinkii la xaday, baabuurkii BMW X7 laftiisa ayaa la xaday marka hore.
In kasta oo uu gaariga yaallay adeegsiga aaladda dabagalka, haddana wax walba oo gaariga dhexdiisa ahaa way dhammaadeen.
Cruise wuxuu ku jilay filimka toogashada atariishada Hayley Atwell. Wuxuu degganaa Grand Hotel oo ku yaal magaalada Birmingham isagoo ku duubayey muuqaalada xarunta dukaamaysiga Grand Central ee u dhow markii tuuganimadu dhacday.
BMW X7 la dhigay hoteelka markii tuuganimadu dhacday. Dhaca ayaa loo calaamadeeyay “farsamo sare” iyadoo la adeegsanayo hannaan 4-tallaabo ah oo u oggolaaday in la furo baabuurka aan muhiimka ahayn iyada oo ku celcelinaysa fob-ka-gudbiyaha gudbiyaha.
Waxaa la soo wariyay in tuugadu ay kaxeysteen boorsooyin kumanaan rodol ah oo uu ku ilaalinayay ilaalada Cruise. Waxaa laga yaabaa in waardiyaha ay ahayd in lagu amro inuu ilaaliyo "jirka", laakiin sidoo kale waxa ku jira gaarigiisa.
Dhacdadu waxay ka dhacday Birmingham inkasta oo boolisku si degdeg ah u baadi -goobay oo u helay baabuurka iyada oo adeegsanaysa aalad elektaroonik ah oo baabuurka lagu qalabeeyay, markii la helay, ma jiraan wax ka hadhay gaadhiga.
Booliisku waxay sheegeen inay heleen warbixin ku saabsan BMW X7 (oo qiimihiisu yahay 100,000 rodol) oo laga xaday Church Street, Birmingham, subaxnimadii hore ee Talaadada. Baabuurka ayaa laga helay waqti yar ka dib Smethwick. CCTV ayaa baaritaano lagu sameeyay aaga gaariga laga helay maadaama baaritaanka uu socdo.
Tom waa mid ka mid ah jilayaasha ugu mushaharka badan Hollywood-ka isagoo haysta lacag dhan $ 600 milyan oo doolar oo uu sannadkii ka helo ku dhawaad ​​$ 50 milyan. Ilaa inta uu ka sameeyo filim kasta, tusaale ahaan, Cruise wuxuu ka kasbaday US $ 75 milyan tii afaraad Hawlgal: Filim aan suuragal ahayn, Borotokoolka Ghost. Wuxuu caan ku yahay sameynta dhammaan istiraatiijiyadihiisa gaarka ah iyo gudbinta bandhigyo badan oo abaalmarin ku guuleystay. Wuxuu caan ku yahay filimada sida taxanaha Mission Impossible, Top Gun, Report Minority, iyo Vanilla Sky.
Wararka ayaa sheegaya in Tom Cruise uu aad uga carooday dhaca loo geystay.
Peter wuxuu leeyahay,
September 1, 2021 at 06: 18
Waxay diyaariyeen inay si fiican u qorsheeyeen Si,, waxaan rajaynayaa inay ahayd uun dhar aan qiimo u lahayn bahalka. U rajee karma xun oo way heli doonaan.
Ka taxaddar Pete